Garsoore haraatiyay ciyaaryahan oo la ganaaxay
Garsooraha oo haraatiyay ciyaaryahan u dheela Nantes oo sidoo kalena kaarka cas siiyay ayaa "shaqada laga joojiyay" illaa amar dambe.
Wararka ugu weyn cayaaraha
Laacibkii hore ee kooxda Manchester United, Ryan Giggs, ayaa lagu wadaa in loo magacaabo tababaraha xulka kubadda cagta ee Wales, isla markaana uu sixiixo qandaraas 4 sano ah.
Manchester city ayaa la sheegayaa in ay qarka u saaran tahay inay weydo Alexis Sanchez oo ay dhici karto inuu Manchester United u tago, sababo la xiriira lacagta lagula kala wareegayo cayaartoyga, ayadoo kooxda Arsenal ay doonayso in laga siisto 35 Malyan oo gini.
Xalay waxaa la dheelay kulankii ugu dambeeyay ee wareegga saddexaad ee koobka FA-ga, kaasi oo dhexmaray kooxaha Brighton iyo Crystal Palace, guushana waxa ay 2-1 ku raacday Brighton.
9 Jannaayo 2018
Maxaad kala socotaa halka uu marayo koobka FA?
Kooxda Arsenal ayaa markii ugu horreysay muddo 22 sano ah waxaq xalay lagu reebay wareegga saddexaad ee koobka FA-ga.
Everton oo la wareegaysa Cenk Tosun
Kooxda Everton ayaa ogolaatay heshiis ay kooxda Besiktas kagala soo wareegayso weeraryahankooda Cenk Tosun, waxaana iminka laga shaqaynayaa macluumaadka heshiiska cayaartoyga lala galayo, sida uu sheegay macallinka kooxda, Sam Allardyce.
Pep Guardiola: jadwalka ciyaaruhu waa "masiibo"
Jadwalka isku shiilan ee Horyaalka Ingiriiska "masiibo" ayuu ku yahay ciyaartoyda, ayuu yiri tababaraha Manchester City Pep Guardiola.
Daafaca dhexe ee kooxda Southampton, Virgil van Dijk, ayaa 1-da bisha Janaayo markii uu furmo suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda waxa uu lacagtii ugu badneyd ee lagu kala iibsado daafac oo ah £75m ugu biiri doonaa kooxda Liverpool.
Harry Kane oo rikoor cusub u dhigay Horyaalka Ingiriiska
Weerraryahanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, Harry Kane, ayaa dhigay rikoor cusub kaddib makii uu markale dhaliyey saddexley ciyaartii ay kooxdiisa 5-2 ku xaaqday kooxda Southampton.
Halkan ka akhriso hadal-haynta kubadda cagta ee maanta ee ay qoreen wargeysyada waa weyn ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska iyo kuwa kalaba.
Jubaland oo ku guuleysatay koobka maamul goboleedyada
Ciyaarta waxay ku dhammaatay 1-0, waxayna la dheeleen Puntland.
Wayne Rooney ayaa sheegay in Everton ay "ku soo noqotay sidii ay ahaan jirtay" ka dib markii ay ka badiyeen kooxda Swansea City.
Real Madrid oo qaadday koobka naadiyada adduunka
Weeraryahanka Real Madrid, Cristiano Ronaldo ayaa ku sii socda dhabbihii guulaha, isagoo kooxdiisa u soo hooyey koob kale, ka dib markii uu dhaliyey goolka kaliya ee ay uga badiyeen Gremio, cayaartii kama dambaysta ahayd ee koobka naadiyada adduunka.
Maxaa xiisaha u yeellay tartanka kubada cagta ee Maamul Goboleedyada
Tartanka Kubadda cagta ee maamul goboleedyada Soomaaliya iyo Gobolka Banaadir ayaa hadda gaaray afar dhamaadka.
Maxaa u dambeeyey wararkii ciyaaraha England ?
Tartanka kubadda cagta ee Egland ayaa maraya meel xasaasi ah waxaana maanta oo Sabti dhacaya ciyaaro kale oo ka mid horyaalka England
Mourinho oo laga dalbaday inuu sharraxo hadal kasoo yeeray
Tababaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho ayaa laga dalbaday inuu sharaxaad ka bixiyo hadal kasoo yeeray kahor ciyaartii kooxdiisa ay la yeelatay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Man city.
Omaar oo ka hadlay heestiisa Barbar
Faysal C. Waraabe oo xaqiijiyey in wiilkiisa Suuriya lagu dilay
Daawo: Dayaarad waddada ka baxday oo badda ku dhici gaartay